Fitadiavam-bahaolana : tsy an’ny FFKM ny tetezamita 18 volana | NewsMada
Une réponse à "Fitadiavam-bahaolana : tsy an’ny FFKM ny tetezamita 18 volana"
Zana-Bano 21/05/2018 à 19:18
Mametraka fanontaniana ny tenako hoe inona no antony hidiran’ny fiangonana amin’ny raharaha pôlitika? Ekena fa ray aman-dreny ara-panahy ry zareo, kanefa kosa ny fanjakàna malagasy dia fanjakàna laika, ka tsy tokony hiditra velively amin’izany ny FFKM, fa tokony ho havelany ho anjara asan’ny mpanao pôlitika izany, na fanelanelanana aza dia tsy tokony ho hataony velively. Tokony ho hatsatra koa ity isaky ny misy fihanianan’ny filoham-pirenena vaovao dia tsy maintsy eo foana fiangonana, satria eo dia efa fandinkana lalam-panorenana satria lasa tsy laika intsony ny firenena. Aoka hazava ny resaka fa ny tenako izay manoratra dia mpivavaka ary tena mino an’Andriamanitra. Tsy anefa izany tamin’ny repôblika voalohany. Ka dia tokony ho tohizana toy izany foana, na raha tsy izany dia hesorina ilay teny milaza manao hoe ao anaty lalam-panorenana fa ny fanjakàna Malagasy dia fanjakàna laika.